Fifidianana nampiady hevitra an'i Thomas Jefferson tamin'ny taona 1800
History & Culture Tantara Amerikana
Fifidianana 1800: Tapak'aina tapaka
Nifandimby nanapa-kevitra ny mpikambana ao amin'ny Antenimiera
Ny fifidianana ny taona 1800 dia iray amin'ireo fifanavoritaka indrindra teo amin'ny tantara amerikana, ary nosoniavina tamin'ny fandrobana, ny famadihan-tena, ary ny fifamatorana tao amin'ny oniversite mpifidy teo amin'ny kandidà roa izay nihazakazaka mpiray tampo tamin'ilay tapakila mitovy. Ny mpandresy tamin'ny farany dia tapa-kevitra ihany taorian'ny andro filalaovana tao amin'ny tranon'ny solontenany.
Rehefa niorina izy dia lasa filoha i Thomas Jefferson . Nanamarika fiovana filôzôfika izany, izay nosoratana tamin'ny hoe "Revolisiona 1800."
Ny valim-pifidianana dia nampiseho fanovàna ara-politika lehibe raha ny filoha roa voalohany, George Washington sy John Adams , no federalista, ary i Jefferson dia nisolo tena ny Antoko Demokratika-Repoblika.
Ny vokatry ny fifidianana dia naneho ny fahadisoana lehibe tao amin'ny Lalàm-panorenan'i Etazonia. Nandritra ny Lalàm-panorenana tany am-piandohana, ireo mpifaninana ho filoha sy filoha lefitra dia nihazakazaka tamin'ny fifidianana. Ary midika izany fa mety hifanohitra tanteraka ny mpivady.
Ny fanitsiana faharoa ambin'ny folo, izay nanova ny lalàm-panorenana mba hisorohana ny olana momba ny fifidianana ny taona 1800, dia nanangana ny rafitra filoham-pirenena amin'izao fotoana izao sy ireo filoha lefitra mihazakazaka amin'io tapakila io.
Ny fifidianana ho filoham-pirenena fahaefatra dia ny kandidà voalohany no nihemotra, na dia narahin'ny fenitra maoderina aza ny fanentanana. Ary nanamarika ihany koa ny fifaninanana satria nanamafy ny fankahalana politika sy ny tena manokana teo amin'ny lehilahy roa mifamatotra amin'ny tantara, Alexander Hamilton sy Aaron Burr .
Ny mpandrafitra tamin'ny taona 1800: John Adams
Rehefa nanambara i George Washington, filoham-pirenena voalohany, fa tsy handingana mandritra ny fe-potoana fahatelo, dia i John Adams, filoha lefitra, no nihazakazaka ary voafidy ho filoham-pirenena tamin'ny 1796.
Adams dia nanjary nanjary nihamaro hatrany nandritra ny efa-taona naha-toeram-piasan'izy ireo, indrindra ho an'ny andia-maso ny Alien sy Sedition Acts, lalàna manohitra ny fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Raha tapa-kevitra ny hihazakazaka ho amin'ny fe-potoam-piasana faharoa ny fifidianana tamin'ny taona 1800, na dia tsy nampanantena aza izany.
Ny anjara asan'i Alexander Hamilton
Alexander Hamilton no teraka tany amin'ny nosy Nevis, any Karaiba. Ary raha toa izy afaka nahazo alalana tamin'ny maha-filoha azy teo ambany Lalàm-panorenana (satria olom-pirenena izy raha nifanaraka ny Lalàm-panorenana), dia tahaka ny endrika mampiady hevitra izy fa tsy ho azo atao mihitsy ny mihazakazaka ho an'ny birao ambony. Na izany aza, dia nanana andraikitra goavana teo amin'ny fitantanana an'i George Washington izy, niasa ho sekretera voalohany tao amin'ny tahirim-bolam-panjakana.
Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa fahavalon'i John Adams izy, na dia samy mpikambana ao amin'ny Antoko Federaly aza. Niezaka izy hiantoka ny faharesen'i Adams tamin'ny fifidianana tamin'ny 1796, ary nanantena ny hahita an'i Adams nandresy nandritra ny fe-potoana faharoa.
Tsy nitàna biraom-panjakana i Hamilton tamin'ny faramparan'ny taona 1790, fotoana iray izay nampiharany lalàna tany New York City. Na izany aza dia nanangana milina ara-politika ara-politika tao New York izy ary afaka nampisy fiantraikany lehibe teo amin'ny politika.
Aaron Burr ho mpifaninana
Aaron Burr, endrika politika malaza any New York, dia nanohitra ny fialan'ny federalisma manohy ny fitondrany, ary nanantena ihany koa fa hahita an'i Adams ny fe-potoam-piasana faharoa.
Mpifanandrina tsy tapaka ho an'i Hamilton, Burr dia nanangana milina politika vaovao ao New York, mifantoka manodidina ny Tammany Hall , izay nifaninana tamin'ny fikambanana federalista Hamilton.
Nandritra ny fifidianana tamin'ny 1800, nanipy ny fanohanany an'i Thomas Jefferson i Burr. I Burr dia nihazakazaka niaraka tamin'i Jefferson tamin'ny tapakila mitovy amin'ny kandidan'ny filoha lefitra.
Thomas Jefferson tamin'ny fifidianana ny 1800
Thomas Jefferson dia mpitan-tsoratry ny fanjakana Washington, ary nihazo an'i John Adams teo akaikin'ny fifidianana tamin'ny taona 1796. Ho mpitsikera ny filoha Adams, Jefferson dia mpilatsaka ho fidiana amin'ny tapakila Demokratika-Repoblikana izay hanohitra ny Federalista.
Ny fanentanana tamin'ny taona 1800
Na dia marina aza fa ny fifidianana tamin'ny taona 1800 no nanamarika ny fotoana voalohany nanaovan'ny kandidà, dia ny fanentanana tamin'io taona io indrindra dia ny fanoratana taratasy sy lahatsoratra maneho ny fikasany.
Ny Filoha John Adams dia nanao dia nankany Virginie, Maryland ary Pennsylvanie izay nalaina ho fitsidihana ara-politika, ary i Aaron Burr, avy amin'ny anaran'ny tapakila Demokratika-Repoblikana, dia nitsidika ireo tanàna nanerana an'i New England.
Tamin'io vanim-potoana io dia nofidina tamin'ny alalan'ireo lalàm-panjakana ny fifidianana avy amin'ny firenena, fa tsy tamin'ny alalan'ny fifidianana malaza. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fifidianana ny lalampanorenam-panjakana dia nanolo-tena ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena, noho izany dia nisy ny fanentanana natao tamin'ny toerana teo an-toerana.
Tie ao amin'ny kolejy
Ny tapakila tamin'ny fifidianana dia ny federalisma John Adams sy i Charles C. Pinckney, ary ny Repoblika Demokratikana-Thomas Jefferson sy Aaron Burr. Ny vatom-pifidianana ho an'ny kolejy dia tsy voaisa hatramin'ny 11 Febroary 1801, ary hita fa ny fifidianana dia teboka.
Jefferson sy ny vondrona mpifanila aminy, Burr, dia samy nahazo vato 73 avy amin'ny fifidianana avokoa. Nahazo vato i John Adams, nahazo vato 64 i Charles C. Pinckney. John Jay, izay tsy mbola nihazakazaka, dia nahazo vato iray fifidianana.
Ny teny voalohany tamin'ny Lalàm-panorenana, izay tsy nanavaka ny vatom-pifidianana filoham-pirenena sy filoha lefitra, dia nitarika ny vokatra henjana.
Raha misy ny fifamatorana eo amin'ny sehatry ny fifidianana, ny Lalàm-panorenana dia nilaza fa ny fanapahan-kevitry ny solotenan'ny Vaomiera no hifidy. Noho izany dia lasa mpifaninana i Jefferson sy Burr, izay efa nihazakazaka.
Ireo federalista, izay mbola nanara-maso ny kongresy kanetibe, dia nanipy ny fanohanany an'i Burr tamin'ny ezaka handresena an'i Jefferson.
Ary raha nanambara ampahibemaso ny tsy fivadihany tamin'i Jefferson i Burr, dia niasa izy mba handresy amin'ny fifidianana ho avy ao amin'ny Tranoben'ny solontenany.
Ary Alexander Hamilton, izay nankahala an'i Burr ary nieritreritra an'i Jefferson ho safidy azo antoka ho filoha, dia nanoratra taratasy ary nampiasa ny fiantraikany tamin'ireo federaly mba hisakanana an'i Burr.
Bala maro ao amin'ny Antenimiera
Ny fifidianana tao amin'ny Antenimieram-pirenena dia nanomboka tamin'ny 17 Febroary 1801, tao amin'ny tranobe Capitol tsy vita tany Washington. Nandritra ny andro maromaro ny fifidianana, ary taorian'ny fifidianana 36 dia tapaka ny teboka farany. Notendrena ho mpandresy i Thomas Jefferson. Notendrena ho filoha lefitra i Aaron Burr.
Ary heverina fa ny herin'i Alexander Hamilton dia nandanja mafy ny vokatra farany.
Lova navelan'ny fifidianana tamin'ny 1800
Ny vokatry ny fifidianana 1800 dia nitarika ny andalana sy ny fanamafisana ny fanitsiana ny Telo ambin'ny folo, izay nanova ny fomba fiasan'ny kolejy.
Rehefa tsy natoky an'i Aaron Burr i Thomas Jefferson, dia nomeny azy tsy hanao zavatra ho filoha lefitra izy. Burr sy Hamilton dia nanohy ny feony tamin'ny farany, izay farany no nahazo ny doka malaza tao Weehawken, New Jersey tamin'ny 11 Jolay 1804. Hamily hamonoana an'i Hamilton, izay maty ny ampitso.
Tsy nogadraina noho ny hamono an'i Hamilton i Burr, na dia voampanga ho mpamadika aza, tatỳ aoriana, ary nafahana. Nipetraka an-tsesitany tany Eoropa izy nandritra ny taona maromaro talohan'ny niverenany tany New York. Maty tamin'ny 1836 izy.
Thomas Jefferson dia nanefa fe-potoana roa ho filoha. Ary izy sy i John Adams dia nametraka ny fahasamihafana tao ambadik'izy ireo, ary nanoratra taratasy maromaro nahafinaritra nandritra ny folo taona farany teo amin'ny fiainany.
Izy roa dia samy maty tamin'ny andro mendri-piderana, ny 4 Jolay 1826, ny faha 50 taonan'ny fanasoniavana ny fanambarana ny fahaleovan-tena.
Momba ny Lalàna Antitrust Clayton
Ny tatitra nataon'i Albert Gallatin momba ny làlana, lakandrano, sambo, ary renirano
Charles Darwin sy ny diany any an-tendrombohitra HMS Beagle
Frantsay & Indian / Ady fito taona
Inona no fahakiviana lehibe?
Dihy amerikana Fialamboly: ny zavakanto
Ny Drafitry ny Union any Albany
Theodore Roosevelt sy ny Departemantan'ny polisy ao New York
Stereographs sy Stereoscopes
Ny indostrian'ny whaling dia namoaka solika, labozia ary fitaovam-pianakaviana
Krismasy ao amin'ny Trano Fotsy Ny taonjato faha-19
Ahoana ny fomba fampiasana ny takelaka ao amin'ny DBGrid
SAT Latin Informe Test Information
Antireligion sy fihetsika manohitra ny fivavahana
Ny fahasamihafana eo amin'ny skateboarding amin'ny nosinao na ny tandroso manaraka
Lisitry ny sekoly fianarana kilasy
Tafio-drivotra fototra eo amin'ny tennis - The Forehand counterhit
Fampianarana ao amin'ny Oniversiten'i Southern Charleston
Hikatona sy hikapoka
Diarin'ny tantara sy gazety an-tserasera
Manao ahoana ny habetsahan'ny vatanao amin'ny andro iray?
Mitondra toaka ao Kanada
"Antigone" tao anatin'ny 60 segondra
Amboary ny RGB mankany TColor: mahazo marimaritra iraisana TColor ho an'ny Delphi
Ny toro-hevitra hanampy ny talen'ny sekoly vaovao dia mandresy lahatra ny taona voalohany
Famaranana ho an'ny famakian-teny amin'ny fampianarana manokana
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Oniversiten'i Missouri Valley
Fomba 3 hampitomboana ny tsindry amin'ny gazy
Fihetseham-po dimy amin'ny Latino sy Televiziona
James Clerk Maxwell, Mpitarika ny Electromagnetism
ACT Scores amin'ny fidirana ao Cal State
Ny ady sinoa-indiana, 1962
Mpanorina LPGA: Ny vehivavy 13 niteraka ny LPGA
Ny vanim-potoan'ny ady ady tany Sina fahiny
Fiomanana ho an'ny Prairie Boogie